नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो ‘डिल’ : होङसी शिवम सिमेन्टलाई जुट्यो १६ अर्ब ऋण
कर्पोरेट नेपाल , १८ भाद्र २०७५, सोमबार, ०८:०० pm
काठमाडौं । चिनियाँ संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाई १६ अर्ब रुपियाँ ऋण प्रदान गर्न पाँच वटा बाणिज्य बैंकहरु सहमत भएका छन् ।
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यति ठूलो लगानीको ‘डिल’ भएको पहिलो पटक हो । यसमा चीनको होङसी होल्डिङ लिमिटेडअन्तर्गतको एक सहायक कम्पनी हङकङ रेड लायन सिमेन्टको ७० प्रतिशत र शिवम सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सहायक कम्पनी शिवम होल्डिङको ३० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
यस परियोजनाका लागि एनएमबी बैंकको अगुवाईमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, प्रभु बैंक, एभरेष्ट बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकले सहवित्तीयकरण कर्जा उपलब्ध गराउन सहमत भएका हुन, जसमा एनएमबीको हिस्सा निकै ठूलो रहेको छ ।
सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ऋण लगानीसम्वन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरियो । यस परियोजनामा एनएमबीले छ अर्ब ७५ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्टले चार अर्ब, प्रभु बैंकले तीन अर्ब, एभरेष्ट बैंकले एक अर्ब २५ करोड र नेपाल एसबिआईले एक अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्नेछन् ।
उत्पादनको तयारी अवस्थामा रहेको यस उद्योगले सात बर्षभित्र ऋण चुक्ता गर्ने सहमति जनाएको छ भने बैंक अफ चाइना तथा चाइना मिङसेन बैंकले बैंक सुरक्षणको जमानत दिएको छ ।
विदेशी लगानीका लागि होङसी शिवम सिमेन्टले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नौ अर्ब ८२ करोड रुपियाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) स्वीकृति लिएको छ । कारखाना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि यस उद्योगले दैनिक छ हजार टन (एक लाख २० हजार बोरा) पुग्नेछ ।
साथै, उद्योगले आफूलाई चाहिने ५० मेगावाट बिजुलीमध्ये १२ मेगावाट विद्युत आफै उत्पादन सुरु गरेको छ । बाँकी विद्युत सरकारले उपलब्ध गराउने भने पछि अहिलेसम्म १३२ केभी प्रसारण्लाइन बनाउन ढिलो गरेकाले डिजलबाट उद्योग सञ्चालन गरिरहेको यसका सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ४८ करोड निक्षेप दिने
एनआइसी एसिया बैंकको नयाँ शाखा मानेञ्ज्याङमा
नेपाल बैंकको नाफा घट्यो
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा मेगा बैंकको नाफा ३९४ प्रतिशतले बढ्यो
एसबिआई बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढि मुनाफा दिने
नेपाल एसबिआई बैंकले १५.७९ प्रतिशत लाभांश दिने
राम कुमार भट्टराईको अगुवाईमा चन्द्रपुरमा खडा भयो ४० बेडको कोरोना अस्पताल
व्यवसायीहरुले बिहीबारदेखि बिहान ११ बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्ने (विज्ञप्तिसहित)
गृहको निर्देशन- ‘सागसब्जी नष्ट गर्न नदिनू, उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनू’
कोरोना अपडेटः विश्वमा ३ लाख ८३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु, करिब ६५ लाख संक्रमित
ठगी गर्न विदेशी नागरिकलाई सघाएको आरोपमा १५ प्रहरीमाथि अनुसन्धान
ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रदेश नं. ५ लाई दियो रु. २५ लाख
एनआईसी एशियामा अनलाईनमार्फत खाता खोल्न थप सहज, यस्तो सुबिधा पाइने
अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद असोज मसान्तसम्म बढाउनु पर्छः नाडा